Vanhu: Shemar Moore anoti Halle Berry ndiye mukadzi wokutanga kuita kuti mwoyo wake urove, aive akangwara - TELES RELAY
HOME » VANHU & VANHU Vanhu: Shemar Moore anoti Halle Berry ndiye aiva mukadzi wokutanga kuita kuti mwoyo wake urove, iye ainyanya kupenga
Vanhu: Shemar Moore anoti Halle Berry ndiye aiva mukadzi wokutanga kuita kuti mwoyo wake urove, iye ainyanya kupenga
Pane mumwe akacheka-mwoyo ex uyo asingagoni kukanganwa Halle Berry? Iwaimbova nyeredzi yeCriminal Minds uye Hollywood shooter Shemar Moore anotaura nezvehukama hwavo hunoshamisa, ikozvino kupfuura. Tine chokwadi kuti iye achiri nemukana, asi iwe hauzive!
Shamwari dzaShemmar Moore
Moore akabuda nenhamba inonakidza yeHollywood nyeredzi. Aiva nehukama naToni Braxton, Kimberly Elise uye nyeredzi Quantico Anabelle Acosta.
Ona izvi zvinyorwa pa Instagram
Post by КАСТИНГИ КИЕВ (@castings_kiev) on Feb 15, 2019 pa 6: 34am PST
Iye akabudawo pamwe chete nemhando dzakasiyana-siyana kusanganisira wekare aimbova Miss Lauriane Gilliéron pamwe nemudzimai wake Moto we rudo Victoria Rowell. Pane huzhinji hwehumwe hwehukama hwake naHalle Berry. Vakatorwa pamwe chete pamakapeti matsvuku mumakore e90.
Kurasikirwa neHalle Berry
Shemar Moore, uyo ari mumwe weHollywood anonyanya kutsvakwa-shandiswa, zviri pachena kuti haasi muukama panguva ino, asi zvichida nokuti mwoyo wake uchiri weHalle Berry. Hongu? Kwete?
Mune hurukuro ne Madamenoire, mutambi akanga akatendeseka pamusoro peukama hwake, chii chaiva chechokwadi uye chakanga chisiri nhema dzenhema.
Zvinyorwa naShemar Moore (@shemarfmoore) on Oct 5, 2018 pa 1: 30pm PDT
Anobvuma kuva kunze naToni Braxton. Yaiva hukama hwake hwokutanga hweHollywood paakanga achangotora Moto we rudo. Asi ndiHalle Berry uyo akamubata zvechokwadi:
Ndiye mukadzi wokutanga kuita kuti mwoyo wangu urove. Ndakadanana naHalle. Vanhu vazhinji zvino vanoziva kuti takaenda pamwe chete, asi taifanira kuchengeta chakavanzika panguva iyoyo nokuti akanga achangobva kurambana naDavid Justice. Ndinogara ndichifara pamusoro pehukama huno. Ndakanga ndisingatauri chete nezvaive, asiwo nokuti taive zvakafanana nenzira dzakawanda.
Iye pakupedzisira akagadzirira kuwana hafu yake
Halle Berry ndiye amai vevana vane 2 uye kunze kwekusvika kwake, asi mutambi anoti iye zvino akagadzirira kutanga mhuri yake.
Zvinyorwa naShemar Moore (@shemarfmoore) on Feb 28, 2018 pa 9: 09am PST
Moore anoti anenge akagadzirira kuva neshamwari naye waanokwanisa kugoverana noupenyu hwake. Anotaura zvakare kuti aizoda kuva baba. Ko ava vaviri vangadzoka pamwe chete here?
VERENGA ZVIMWE: "Ndinoda kuva murume asinganzwisisiki": Shemar Moore, nyanzvi yeCriminal Minds, anotaura nezvehupenyu hwake
Nyaya iyi yakatanga kutanga FABIOSA.FR
Stéphane Plaza mumucheka mutsvuku collimator: "Anotitora senjiva"
Chimène Badi yakatsoropodzwa ne "jesters" panguva yeEurovision Enda: "Yakanga ichibhururuka zvakanyanya"